डेढ महिनादेखि थन्कियो न्याम्स उपकुलपति सिफारिस, के चाहन्छन् प्रम ? – Health Post Nepal
डेढ महिनादेखि थन्कियो न्याम्स उपकुलपति सिफारिस, के चाहन्छन् प्रम ?
२०७५ मंसिर ११ गते १८:०५
मुलुककै सबैभन्दा ठूलो सरकारी अस्पताल वीर र यसको प्राज्ञिक निकाय चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपति सिफारिस भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि नियुक्ति हुन सकेको छैन । प्रतिष्ठानका सहकुलपति एवम् स्वास्थ्यमन्त्रीस्तरीय समितिले लामो समय लगाएर अत्यन्त पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै १ असोजमा तीनजनाको नाम उपकुलपतिका लागि सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस हुनेमा क्रमशः डा. डिएन साह, डा. ढुण्डीराज पौडेल र डा. अजित रायमाझी छन् ।
उपकुलपति नियुक्त नहुँदा सबैभन्दा ठूलो सरकारी अस्पताल वीर र सबैभन्दा बढी विशेषज्ञ चिकित्सक पढाइ हुने प्रतिष्ठान दुवै प्रभावित बनेका छन् । साउनदेखि नै तत्कालीन उपकुलपति डा. गणेश गुरुङसहित रेक्टर, रजिस्ट्रारको समेत पदावधि सकिएको थियो ।
सिफारिसलगत्तै प्रधानमन्त्री अमेरिका भ्रमणमा निस्किएकाले उनी अमेरिकाबाट फर्किनासाथ उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्ने बताइएको थियो । प्रधानमन्त्री फर्किएको लामो समय बितिसक्दा पनि सिफारिस यथास्थितिमै छ । ‘पारदर्शी प्रक्रियाबाटै छनोट गरी तीनजनाको नाम सिफारिस गरिएको हो, तर पनि अहिलेसम्म किन हो टुंगो लागेको छैन,’ सहकुलपति एवम् स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवका स्वकीय सचिव महेश चौरसियाले भने ।
चौरसियाका अनुसार नियुक्तिका सन्दर्भमा मन्त्री यादवले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटका क्रममा कुरा उठाउँदा ‘हेर्दै छु, प्रक्रियामै छ’ भन्ने जवाफ आइरहेको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्मा लानुपर्ने, समिति बनाउनुपर्ने विषय होइन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीबाटै टुंगिन्छ, र पनि भइरहेको छैन ।’ उपकुलपति नियुक्त नहुँदा सबैभन्दा ठूलो सरकारी अस्पताल वीर र सबैभन्दा बढी विशेषज्ञ चिकित्सक पढाइ हुने प्रतिष्ठान दुवै प्रभावित बनेका छन् । साउनदेखि नै तत्कालीन उपकुलपति डा. गणेश गुरुङसहित रेक्टर, रजिस्ट्रारको समेत पदावधि सकिएको थियो ।
त्यसैगरी, अस्पतालका निर्देशक डा. भूपेन्द्र बस्नेतको पदावधि असोजमा सकिएको थियो भने ट्रमा सेन्टरका निर्देशक डा. प्रमोद उपाध्यायले समेत २५ असोजमा राजीनामा दिएका थिए । अहिले न्याम्सअन्तर्गतका दुवै अस्पतालका निर्देशक निमित्त छन् । वीरमा मन्त्रीले डा. बस्नेतलाई नै अर्को नियुक्ति नहुँदासम्मका लागि निमित्तको जिम्मेवारी दिएका छन् भने ट्रमामा डा. विनोद शेरचन निमित्तनिर्देशक छन् । निर्देशक नियुक्त नहुँदा दैनिक र अत्यावश्यकीय सामग्री खदिर नरोकिए पनि ठूला उपकरण खरिदलगायत महत्वपूर्ण काम अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।
चौरसियाका अनुसार नियुक्तिका सन्दर्भमा मन्त्री यादवले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटका क्रममा कुरा उठाउँदा ‘हेर्दै छु, प्रक्रियामै छ’ भन्ने जवाफ आइरहेको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्मा लानुपर्ने, समिति बनाउनुपर्ने विषय होइन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीबाटै टुंगिन्छ, र पनि भइरहेको छैन ।’
प्रतिष्ठान ऐनअनुसार उपकुलपतिको नियुक्ति सहकुलपतिको सिफारिसमा कुलपति (प्रधानमन्त्री)बाट र अन्य पदाधिकारीको नियुक्ति उपकुलपतिको सिफारिसमा सहकुलपतिबाट हुन्छ । निमित्त उपकुलपति डा. सुबोध अधिकारीले मुख्य पदाधिकारीविहीन हुँदा आफू एक्लैलाई कामको चाप परेको बताए । ‘रेक्टर, रजिस्ट्रार सबैले गर्नुपर्ने काम हेर्दा निकै भार परेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘सम्बन्धित ठाउँमा चाँडै टुंग्याइदिनुस् भनिरहेको छु, तर पनि भएको छैन,’ उनले भने ।
पारदर्शी छनोट प्रक्रिया
न्याम्सको इतिहासमै पहिलोपटक पारदर्शी मापदण्ड निर्धारण गरेर दरखास्त आह्वान गरी सिफारिस प्रक्रिया पूरा भएको थियो । मन्त्री यादव संयोजक रहेको समितिमा मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल र नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. धर्मकान्त बास्कोटा सदस्य थिए । समितिले जारी गरेको सूचनापछि पहिलो चरणमा २२ जनाको दरखास्त परेको थियो । जसमध्ये मापदण्ड पुगेका र कुनै विवादमा नमुछिएका ६ जना सर्टलिस्टमा परेका थिए । सर्टलिस्टमा परेकाहरूको प्रस्तुति मूल्यांकनका लागि छुट्टै विज्ञ समूहसमेत बनाइएको थियो । विज्ञ समूहमा डा. लोकविक्रम थापा, डा. रमेशकान्त अधिकारी, डा. दामोदर पोखरेल, डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती, डा. भगवान कोइराला, डा. केके राई, डा. अञ्जनीकुमार झा, डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल र डा. अर्जुन कार्की थिए । विज्ञसामु दिएको प्रस्तुतिलगायत विविध पक्षबाट मूल्यांकन गरी तीनजनाको नाम समितिबाट टुंगो लागेको थियो ।
डा. अधिकारी आफूलाई उपकुलपति बन्न प्रस्ताव आए पनि इच्छा नभएको बताउँछन् । ‘म क्लिनिकल काममै रमाउँछु, त्यही मनपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले पनि ओपिडी जान, शल्यक्रिया गर्न केही भ्याएको छैन ।’
किन रोकिएको छ त ?
सिफारिसमा परेकामध्ये डा. ढुन्डीराज पौडेलबाहेक अन्य प्रतिष्ठानबाहिरबाट परेको भन्दै नेकपानिकट केही प्राध्यापकले नियुक्ति प्रक्रिया खारेजीको माग गर्दै मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीलाई समेत ज्ञापनपत्र दिएका थिए । स्रोतका अनुसार उपकुलपतिका लागि न्याम्सबाट निर्विवादित बन्न सक्ने उम्मेदवारमध्ये हाल निमित्त सम्हाल्दै आएका डा. सुबोध अधिकारीलाई मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट समेत नेतृत्व सम्हाल्न आग्रह गरिएको थियो । तर, उनले नमानेपछि छनोट समितिका सदस्यसमेत न्याम्सबाहिरबाट गर्ने पक्षमा देखिएका थिए । डा. अधिकारी आफूलाई उपकुलपति बन्न प्रस्ताव आए पनि इच्छा नभएको बताउँछन् । ‘म क्लिनिकल काममै रमाउँछु, त्यही मनपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले पनि ओपिडी जान, शल्यक्रिया गर्न केही भ्याएको छैन ।’
डा. बराल बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री र नेकपाको आफ्नो उम्मेदवार सिफारिसमा परेका मध्ये कोही पनि छैनन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री प्रक्रिया लम्ब्याएर मन्त्रीलाई गलाउने रणनीतिमा छन् ।
के हो प्रधानमन्त्रीको अप्ठ्यारो ?
सिफारिसमा परेकामध्ये पहिलो नम्बरमा रहेका डा. डिएन साह सबैभन्दा काबिल उम्मेदवार हुन् । तर, उनी न्याम्सका होइनन् । आइओएमबाट अवकाशप्राप्त साह राजनीतिक रूपमा पनि मन्त्री यादवसँगै नजिक रहेकाले न्याम्सका वरिष्ठ प्राध्यापकहरू (खासगरी नेकपानिकट) उनलाई आउन दिने पक्षमा छैनन् । न्याम्सबाहिरबाट गर्दा प्रधानमन्त्री र नेकपानिकट नेताहरू डा. गेहनाथ बराललाई ल्याउने पक्षमा थिए । सिफारिस समिति र विज्ञ कमिटीबाट पनि केही वरिष्ठ चिकित्सकले उनकै पक्षमा अडान राखेका थिए । तर, डा. बराल न्याम्सअन्तर्गत पिएचडीको विद्यार्थीका रूपमा भर्ना भएका थिए । उनले राजीनामा दिएर न्याम्सबाट सहमति नलिईकनै दरखास्त दिएकाले ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुने भन्दै समितिका सदस्यहरूले मानेनन् ।
डा. बराल बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री र नेकपाको आफ्नो उम्मेदवार सिफारिसमा परेका मध्ये कोही पनि छैनन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री प्रक्रिया लम्ब्याएर मन्त्रीलाई गलाउने रणनीतिमा छन् । सकेसम्म पुनः प्रक्रिया थाल्ने र यही सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपरे पनि कम्तीमा अधिकांश पदाधिकारी आफूनिकटका बनाउने प्रधानमन्त्रीको दाउ छ । ‘यसबीचमा डा. साहले पनि म उपकुलपति भए जे भन्नुहुन्छ, मान्छु भनिदिएनन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘उनले म आएपछि मेरो अनुसार चलाउँछु भनिरहेका छन्, त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री र नेकपाका नेताहरूलाई अन्य पदाधिकारी पनि आफूले भनेअनुसार नहोला कि भन्ने त्रास छ ।’
One thought on “डेढ महिनादेखि थन्कियो न्याम्स उपकुलपति सिफारिस, के चाहन्छन् प्रम ?”
Prof Dr Gehanath Baral says:
न्याम्स मा संस्था स्थापना कालदेखि हालसम्म पि एच् डि कार्यक्रम संचालन नै नभएको कुरा संवाददातालाई थाहा नभएको ले यो कमेन्ट लेखेको छु। न्याम्स ले पि एच् डि बाहेकका अन्य एकाडेमिक प्रोग्रामहरु र तालिम मात्र संचालन गरिरहेको छ।